laambadaha Dareenka farshaxanka - fikradaha guriga iyo beerta
Ka dhig nalal saliid ah
Dabka dabiiciga ah wuxuu had iyo jeer ku abuuraa raaxada guriga wayna awoodaa
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah figradaha waaweyn ee qurxinta nalalka. Sidee
Qaar ka mid ah fikradaha qurxinta qolka jiifka oo aad u qurux badan. Isbarashada
Xulo qaabkaaga! Waxaan kuu soo bandhigaynaa xoogaa qurux badan oo xarrago leh
Xusniyoon waa maalin loo dabbaaldego Oktoobar 31 inta badan xilliyadii
Shumaca shumaca waxay abuurtaa jawi kalgacal iyo kalgacal leh. Goorma
Ku soo dhawow xagaaga adiga oo wata alaabo ay ka mid yihiin Barbaarta caan ka ah Silsilad Mareykan ah
Laydhku waa qayb muhiim ka ah gudaha. Laga soo bilaabo doorashada ku habboon ee
Shaki la'aan, beer qurux badan ma aha oo keliya inta lagu jiro maalinta,
Fikradaha qurxinta jardiinooyinka cusub. Xoogaa talo bixin ah sida